Fisandohana teny Tsarasaotra :: Lehilahy tratra nitonona ho inspekteran’ny polisy - ewa.mg
News - Fisandohana teny Tsarasaotra :: Lehilahy tratra nitonona ho inspekteran’ny polisy
Voatazona ao amin’ny fonjakelin’ny polisy, eny amin’ ny Kaomisarian’ny polisy foibe, etsy Tsaralalàna, ny lehilahy iray nisandoka ho polisy. Nilaza ho inspekteran’ ny polisy izy, nandritra ny fandalovany teny Tsarasaotra, afak’omaly. Hoentina eny amin’ny Fampanoavana, anio, ity lehilahy ity.
Nosakanan’ny polisy ny mpitondra môtô iray tsy nanao aroloha nandalo teny Tsarasaotra, afak’omaly tolakandro. Voalaza fa saika tsy nety nijanona io mpitondra môtô io sady nilaza fa mahafantatra polisy ka hiantso izany raha tsy avela handeha.
“Niantso tamin’ny telefaonina an’ilay havany nolazainy fa polisy io mpitondra môtô io. Tonga teny Tsarasaotra tokoa ny lehilahy iray nanao akanjo ba miloko maitso mitovy amin’ny an’ny Polisim-pirenena. Nilaza ho inspekteran’ ny polisy izy, saingy sarona ny fisandohany andraikitra rehefa nangatahina taminy ny karatra maha polisy azy. Mpamily no asany voasoratra tao amin’ny kara-panondrony ”, araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny Polisim-pirenena.
Nosamborina avy ha- trany ity mpisoloky. Nogiazana toy ireny môtô tsy manara-dalàna ireny ilay kodiaran-droa. Fantatra fa teny amin’ny fivarotana lamba efa avy nampiasaina na (friperie) no nahitan’ilay lehilahy ny akanjo mitovy amin’ny an’ny mpitandro ny filaminana.
L’article Fisandohana teny Tsarasaotra :: Lehilahy tratra nitonona ho inspekteran’ny polisy est apparu en premier sur AoRaha.
Mbola ny Praiminisitra teo aloha ihany no Praiminisitra vaovao nanomboka omaly. Ny tonta foana no avadibadika eto Madagasikara! Ireo mitondra solomaso volomboasary no resy lahatra fa nandeha tamin’ny tokony ho izy ny raharaham-pirenena tao anatin’ny volana maromaro nitondran’ny Filoha vaovao izay. Izay mahita lazaina, indrindra fanakianana, dia naman’ireo mpanenjika any afara izy izay. Tsetsatsetsa tsy aritra amin’ity fomba fitenenana nalaza tao anatin’ny herintaona latsaka kely ity moa ny hoe fa ny mpanohana angaha moa eo aloha, fa tsy ao afara ihany koa? Eny e, fa tokony hikombom-bava ny rehetra ao anatin’izao fe-potoam-piasana hanatanterahana ny velirano izao. Ny lehiben’ny governemanta iny vita ihany, fa asa izay ho afitsoky ny fanendrena an’ireo minisitra vaovao (sa tonta?) manaraka eo. Na voafidim-bahoaka na tendren’ny mpitondra mantsy, toa ny eo ihany no miverina. Toy izany koa ny toetra sy ny fihetsika ary ny fomba fiasa. Nantenaina ho levona niaraka tamin’ny fitondrana teo aloha ilay antenimieran’ny “malety” sy ireo olom-boafidy be adivarotra amin’ny tombontsoany, kinanjo inona no teo! Mafimafy sahady ny hiakiaka avy etsy Tsimbazaza. Fitadiavantoerana ao amin’ny rafitra mpanatanteraka sy fitakiana fiara tsy mataho-dalana no nahazoan-dramatoa filohan’ny Antenimieram- pirenena an’ireo vato 100% nahalany azy, tsy nanavahana mpomba na mpanohitra, satria nampiraisin’ny firangorangoana avokoa. Adino tanteraka mihitsy io adiady politika io rehefa mivelatra eo ambony latabatra ny adihevitra momba ny tombontsoan’ireo olom-boafidy sy olom-boatendry eto amintsika. Tsy misy vaovao fa ny fomba ratsy nifandimbiasan’ireo fitondrana hatramin’izay ihany izao lovaina sy tohizana soa aman-tsara izao. Ary mba inona, hono, ny vaovao amin’ireo velirano sy fandaharanasan’ny mpitondra vaovao? Ankoatra an’ireo zava-bita avy tamin’ny fanohizam-pitantanana ny raharaham-pirenena… L’article Tsy misy vaovao ! est apparu en premier sur AoRaha.
TAKAITRAN’NY KRIZY PÔLITIKA :: Olona telonjato sy arivo nanao fangatahana fanonerana
Tamin’ny tatitry ny asa vitan’ny Filan­kevitry ny fampihavanana malagasy na FFM nandritra ity taona ity teny Ampefiloha, omaly, dia fantatra fa miisa telonjato sy arivo ireo olona nanao fangatahana fanonerana vokatry ny krizy pôlitika. Nahatonga antontan-taratasy fangatahana eny anivon’ny rafitra ity ireo lasibatry ny krizy pôlitika ireo. Ny dosie zato no efa vita fandinihana. Mitady vola amin’ireo firenen-dehibe sy ny Firenena Mikambana ny FFM mba hanomezana ny volan’ireo olona nanao fangatahana ireo. Ankoatra ireo rava orinasa sy potika fananana nandritra ireo krizy teto amin’ny firenena dia nahitana ireo gadra pôli­tika ihany koa tamin’ireo mpangataka fanonerana teny anivon’io rafitra io. Noho ny fahasarotan’ny fandinihana ny antontan-taratasin’izy ireo no voalaza fa antony nahavi­tsy ireo raharaha voadinika hatreto. Ny Vondrona Eoropea­nina, ny Vondrona Afrikanina, ny Sinoa, i Afrika Tatsimo ary ny Maraokana no samy voa­tonona avokoa fa isan’ireo firenena nangatahan’ny FFM vola. Nivoitra ireo nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana fahatelon’ity rafi-panjakana teny Ampefiloha ity, omaly maraina. Ankoatra izay, nilaza ny hanamafy ny vokatra efa azo tamin’ny asa fametrahana ny fitoniana teto amin’ny firenena nandritra na taorian’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, ry zareo. Tsangan-tanana amin’ny famotsoran-keloka “Efa nisy ny vokatra azo tamin’iny fifidianana filoham-pirenena iny fa mila hamafisina izany. Hidina any amin’ny faritra niaviany avy ireo mpikambana ato amin’ny FFM hametraka sy hitandro hatrany izany fitoniana izany. Hotohizana ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny zotram-pifidianana toy ny Voamieram-pirenena mahaleo­tena misahana ny fifidianana, ny fiaharamonim-pirenena, ny Rohy, ny Transparency international sy ny sisa”, hoy i Maka Alphonse, filohan’ny FFM Isan’ny anjara andraikitr’ izy ireo ny momba ny fanomezana famotsoran-keloka. Voaresaka ny momba an’io teny Ampefiloha ka fantatra fa nisy olona enina amby telopolo ireo voaheloky ny Fitsarana noho ny raharaha pôlitika ka nanao nangataka famotsoran-keloka teny amin’ny FFM. “Efa naverina eny amin’ny Fitsarana Tampony ny fangatahan’ ireo olona ireo mba hakana fankatoavana eo amin’ny lafiny lalàna. Aorian’izay dia miverina aty aminay izany ary tapahina mandritra ny tsangan-tanana amin’ny fivoriam­ben’ny mpikambana rehetra ato aminay ny fahafantarana ny valin’ny fangatahan’ireo olona ireo”, hoy hatrany ny FFM. L’article TAKAITRAN’NY KRIZY PÔLITIKA :: Olona telonjato sy arivo nanao fangatahana fanonerana est apparu en premier sur AoRaha.
Fahamailoan’ny vondrona sendika
Nanao antso avo amin’ny fitondram-panjakana mba ho mailo tanteraka amin’ny fanaovana sivana an’ireo mpiasam-panjakana tsy ara-dalàna ny vondrona sendika eto Madagasikara (Ssm), izay tarihin-dry Rakotoniasy Jean Raymond. Be loatra ny kolikoly manodi­dina ny fampidirana mpiasam-panjakana teto amintsika ka tokony harahi-maso akaiky mialoha ny hanapahana hevitra amin’ny fanadiovana ny asam-panjakana, araka ny teniny. L’article Fahamailoan’ny vondrona sendika est apparu en premier sur AoRaha.
Andron’ny mponina : misokatra ho an’ny rehetra ny fifaninanana
Efa misokatra ny fandraisana anjara amin’ny fifaninanana ho an’ny andron’ny mponina, karakarain’ny minisiteran’ ny Mponina sy ny fiahiana sosialy, ahafahan’ny sokajin-taona rehetra mandray anjara. Misokatra ho an’ny fikambanana sy ireo tanora tia famoronana ihany koa ny fifaninanana. Tanjona ny fitrandrahana ny fahaiza-manao sy ny talenta miafina. “Andao hiara-hientana ho amin’ny sosialim-bahoaka” ny lohahevitra voizina amin’izany fifaninanana izany ary anisan’ ny lohahevitry ny fanamari­hana ny Andron’ny mponina rahateo. Harakitra anatin’ny VCD ny sanganasa famoronana, tsy tokony hihoatra ny 15 mn ary tsy latsaky ny 10 mn. Aterina eny amin’ny biraon’ny minisiteran’ny Mponina amin’ny faritra misy ny mpifaninana izany hatramin’ny talata 11 ao­gositra ho avy izao alohan’ny amin’ny 1 ora tolakandro. Fampitaovana miavaka izay famoronana misongadina indrindra no loka ho azon’izay telo voalohany mendrika. Raha ny salanisa; mahatratra 25 680 342 ny mponina ma­nerana an’i Madagasikara ary vehivavy ny 51% amin’izany, tantsaha kosa ny 80%. Tsikaritra fa tsy mirindra ny fitombon’ny mponina sy ny harinkarena ary mitondra voka-dratsy ho an’ny harinkarena ny Covid-19. Misy ny fanentanana ezahina voizina amin’ny haino aman-jery mahakasika ny An­dron’ny mponina miompana amina lohahevitra maromaro toy ny firaisankina sy ny fiaraha-mientana amin’ny valanarerina. Ny zon’ny vehivavy sy ny an­kizivavy. Ny ady atao amin’ny herisetra. Ny fanambadian’ny ankizy ary ny fandrindranany fiainam-pianakaviana.Tatiana AL’article Andron’ny mponina : misokatra ho an’ny rehetra ny fifaninanana a été récupéré chez Newsmada.
Hita faty nihantona tao an-tranony, ny talata hariva teo tokony ho tamin’ny 07 ora ny vata-mangatsiakana teratany frantsay iray. Monina ao amin’ny fokontany Bazarikely, renivohitr’i Antsiranana izy io. Rehefa naharay antso mikasika ity tranga ity ny mpitandro filaminana, nidina teny an-toerana nanamarina izany. Mbola tratran’ireo polisy avy ao amin’ny « Section de recherche criminelle » nihantona tamin’ny tady ny nofo-mangatsiakan’io teratany vahiny 58 taona io tamin’ny fotoana nahatongavany teny. Nanatrika izany koa ny mpitsabo ao an-toerana, hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray.Fantatra ny mombamomba ilay namoy ny ainy. Rehefa vita ny fanadihadiana, natolotra ireo tompon’andraikitra ao amin’ny «concile de France» izany. Misokatra ihany koa ny famotorana ny raharaha.Nanazava momba ny fiarovana ny ain’ireo teratany frantsay monina ao Antsiranana kosa ny kolonely, kaomandin’ny CIRGN ao an-toerana, omaly. Fihaonana natao tao amin’ny « concile de France » ao Antsiranana. Henintsoa Hani L’article Namono tena sa nisy namono? Teratany frantsay iray hita faty nihantona tamin’ny tady a été récupéré chez Newsmada.